Ma run baa in la dilay xaaska hogaamiyaha Boko Xaraam? - BBC News Somali
Ma run baa in la dilay xaaska hogaamiyaha Boko Xaraam?
Image caption Hogaamiyaha Boko Xaraam Abubakar Shekau
Xaaska hogaamiyaha Boko Xaraam, Abubakar Shekau, ayaa la sheegayaa inay dhici karto in lagu dilay duqayn cirka ah oo ay qaadeen ciidanka cirka ee Nayjeeriya sida laga soo xigtay saraakiil.
Afhayeen u hadlay ciidanka cirka ee Nayjeeriya, Olatokunbo Adesanya, ayaa hadal uu Arbacadii soo saaray ku sheegay in xog ay dadweynaha ka heleen ay muujisay in xaaska hogaamiyaha Boko Xaraam, Mallama Fitdasi, ay dhici karto in lagu dilay duqayn dhawaan lagu guulaystay oo ka dhacday deegaanka Durwawa oo ku yaalla duleedka Urga oo u dhow Konduga.
Sida uu afhayeenku sheegay "Mallama Fitdasi, waxay odaygeeda wakiil uga ahayd kulan isku xir argagixiso ahaa oo ka dhacay halka weerarka lala eegtay".
"Waxaa la xusuustaa in ciidanka cirka ee Nayjeeriya la soo sheegay inay si guul leh cirka uga duqeeyeen tiro badan oo Boko Xaraam ah meesha la yiraahdo Durwawa, 19 Oktoobar 2017. Qiimaynta lagu sameeyey khasaaraha ayaa muujisay in goobta uu dab ka kacay, kaasoo dhaawac u gaystay qaab dhismeedka Boko Xaraam ee deegaankaas, ayadoo intooda badan laga dhigay kuwo laga takhallusay, dhowrna ay baxsadeen" ayuu yiri afhayeenka.
Wuxuu intaa ku daray in uu socdo dadaal la doonayo in lagu xaqiijiyo dilka xaaska Abubakar Shekau.
Mr Shekau oo ah hogaamiye baxsad ah oo madax u ah garab ka tirsan Boko Xaraam ayaan la hayn dhowr sano, inkastoo ay baadigoobayaan maamulayaasha Nayjeeriya iyo kuwa Maraykanka.
Kooxdiisa oo doonaysa in khilaafo islaami ah laga hirgaliyo waqooyiga Nayjeeriya ayaa mas'uul ka ahayd dhimashada ilaa 100,000 oo qof, tan iyo 2009 markii uu kacdoonku billowday.
Inkastoo milateriga Nayjeeriya iyo qolyaha ay bahwadaagta yihiin ay ku dadaalayeen inay wiiqaan kooxdaas, haddana kooxdu waxay weerarro ku qaaddaa inta badan shacabka rayidka ah ee gobollada Borno iyo Yobe.